- जेठ ३, २०७६, शुक्रबार, रामधुनी
बवासिरलाई अंग्रेजीमा पाइल्स पनि भनिन्छ । यो जुनसुकै उमेरमा हुने मलद्वारको रक्त नालीमा अत्यधिक दवाबका कारण हुने रोग हो । अस्वस्थ्यकर जीवनशैलीले गर्दा हुने यो रोग लाग्दा प्राय मलद्वार (एनस)को रक्तनलीहरुमा अत्याधिक दबावको कारण उत्पन्न हुने गर्दछ । बवासीर दुई प्रकारको हुने गर्दछ, आन्तरिक र बाह्य। आन्तरिक बवासिरमा रक्त नलीहरुको...
- बैशाख २३, २०७६, सोमबार, काठमाडौं
म ३० वर्षीय विवाहित पुरुष हुँ । हप्तामा दुई पटक श्रीमतीसँग यौन सम्पर्क राख्छु । यौन सम्पर्कका बेला मेरो वीर्य चाँडै स्खलन हुने गरेको छ । श्रीमती बेलाबेलामा झर्किने गर्छिन् । यौन सम्पर्कको अवधि कति हुनुपर्ने हो ? शीघ्र पतन रोक्ने केही उपाय बताइदिनुभए आभारी हुने थिएँ । आर सेक्स...
- बैशाख २०, २०७६, शुक्रबार, काठमाडौं
केही समयपछि म विवाह गर्ने योजनामा छु। पहिलो यौन सम्पर्कलाई लिएर के–के कुरामा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ ? के विवाह पहिलेको यौन सम्पर्क थाहा हुन्छ ? आर, चितवन नेपालमा धेरैजसोले विवाहपछि मात्र यौन सम्पर्क स्थापित गर्दछन् भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनबाट प्रस्ट भएको छ। तथापि, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण तथा उच्च शिक्षासँगै विवाहपूर्व...
- चैत्र ५, २०७५, मंगलबार, काठमाडौं
मरिचालाई मानिसहरुले विभिन्न तरिकाले प्रयोग गर्ने गर्छन । कोहिले चियामा, खिरमा त् कोहिले त्यतिकै पनि सेवन गर्ने गर्छन । तर कतिलाई थाहा नहुन सक्छ यसका फाइदा हरुका बारेमा । मरिचको सेवनले मानिसलाई पेटको दुखाइ कम गर्नुका साथै मरीचमा हुने एन्टीब्याक्टेरियल गुणले पेटमा हुने इन्फेक्सनबाट बचाउँछ । मोटो मानिसहहरुका लागि मरिच...
- चैत्र १, २०७५, शुक्रबार, रामधुनी
अहिले हावाहुरी र सुख्खा मौसममा खासगरी झुम्काको सडकमा हिँडडुल र आवतजावत गर्दा धुलो र गाडीबाट निष्कने धुवालाई बढि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । हाम्रो निकै महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको आखालाई नै यसले धेरै प्रभाब पार्ने गर्दछ । धुलोबाट आखा पाक्ने, एलर्जी हुने, धेरै सुखा हुने, आखाका बिभिन्न प्रकारका इन्फेक्सन लगाएत...
- फाल्गुन १६, २०७५, बिहिबार, काठमाडौं
मासु उसिनेर खाँदा राम्रो । तारेर, भुटेर सकेसम्म नखाएकै बेस डा. डिबी सुनुवार -प्राकृतिक चिकित्सक - शरीरको सन्तुलित पोषणका लागि २० प्रतिशत अम्लीय र ८० प्रतिशत क्षारीय पोषण तत्व आवश्यक हुन्छ । त्यसैले शरीरको सन्तुलित पोषणका लागि खानामा बढीभन्दा बढी क्षारीय तत्व भएका खाद्यपदार्थ छनोट गर्नु ठीक हुन्छ । -...
जाडो मौसममा कसरी राख्ने बच्चाको ख्याल
- मंसिर १४, २०७५, शुक्रबार, सुनसरी
हिँउद महिना सुरु भइसकेको छ हिँउद महिना सुरु भए लगतै जाडो दिन प्रतिदिन बढिरहोको छ । जाडोले बिशोष गरी बृद्धबृद्धा, रोगी र बालबालिकाको दैनिकीमना असहज बनाइदिन्छ । उक्त बेलामा बच्चालाई ख्याल गरिएन भने उनीहरुलाई रुँघा, ज्वरोले सताउने गर्दछ । रुघा, ज्वरो क्रममा पनि हेलचेक्रयाई गरियो भने निमोनिया हुनसक्छ । निमोनिया...
दाँतको किरा मार्ने घरेलु उपाय
- कार्तिक १४, २०७५, बुधबार, सुनसरी
दाँतमा किरा लाग्ने समस्या साना बालबालिका देखी लिएर सम्पुण उमेर समुका मानिस जस्लाई पनि हुन सक्छ । दाँतमा किरा लाग्नुको मुख्य कारण दाँतलाई ठिक तरिकाले दैनिक हेरविचार नगर्नु हो । भनिछ दाँत दुखाइ सबै भन्दा धेरै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दुखाईबाट छुट्कारा पाउनु पतिदिन खाना खानु सरह नै महत्वपूर्ण हुन्छ...
भुटेको लसुन खाँदा हुने फाइदा यस्ता छन्
- असार १५, २०७५, शुक्रबार, काठमाडौं
हरेक खाने कुराले हामीलाई एक न एक तर्फबाट फाईदा दिईरहेको हुन्छ । यस्तै खानामा यदि लसुन राखियो भने हरेक सब्जीको स्वाद २ गुना बढ्ने गर्दछ । लसुनलाई खानामा मात्र नभईकन स्वास्थ्यको लागि पनि निकै फाइदाजनक भनिएको छ तर काचो लसुन भन्दा भुटेको लसुन धेरै लाभदायक रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।...